Vidiyo foto ọzọ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Foto ndị ọzọ
nọmba telivishọn foto foto adobe cc. Na-ekwu, hey, Achọrọ m ịhapụ ya ruo mgbe ebighị ebi
Esi lelee Exif na foto
Etu esi lelee Exif maka foto Showexif O juputara na mmemme nke maara otu esi eme nke a ma obu emebere ya. Belụsọ, n'eziokwu, e si na fromntanetị wepụta foto ahụ, a gaghị enwe oke iwe.
Kedu akụkụ nke foto nke onye ahụ nwụrụ anwụ kwesịrị ịtụgide obere akwụkwọ ntanye? Oleekwa ebe a pụrụ ịkọwa nke a?
N'akuku dị a ofaa ka foto onye ahụ nwụrụ anwụ kwesịrị ka a na-eke teepu ojii? Ebee ka a ga-esi kọwaa nke a? maa ala aka nri ... A na-amụnye teepu ahụ dị na ala aka nri ma ọ bụ na nkuku elu (nke dị anyị nso). Agbanyeghi ...
GP PowerBank Ndenye 3 na-acha ọkụ uhie maka nkeji abụọ ma na-egbuke egbuke.
GP PowerBank Ndenye 3 na-acha ọkụ uhie maka nkeji abụọ ma na-egbuke egbuke. O yikarịrị ka batrị abanyelarịrị. Enwere m otu ebe nchekwa. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Gini mere kọmputa anaghị ahụ igwefoto dijitalụ?
Gini mere kọmputa anaghị ahụ igwefoto dijitalụ? Gwa m. M tinyere igwe dijitalụ na laptọọpụ site na ụzụ, achọtara ya, ma ọ na-ede na nchekwa ahụ abaghị uru. Ikekwe komputa anaghị ahụ igwefoto, dịka nm ...
esi lelee foto na plagiarism
Kedu ka ị ga-esi lee foto anya maka akwụkwọ ịkpọasị? Ọ bụrụ na ịzụta foto site n'aka onye edemede, ọ bụghị ihe ihere ịjụ ka ị hụ isi iyi ahụ. Igwe foto dị ala nwere ike idekọ onye edemede na exif. ...
Kedu otu esi ele foto site na mkpo ọkụ? na nubuck
Etu esi ele foto site na draịvụ flash? Na nubuck, ị na-etinye ya na oghere ebe nchekwa ma na-ele anya nubuck - ọ dịghị ihe ọ bụla. Maka nubuck bụ ụdị akpụkpọ anụ nke eji eme akpụkpọ ụkwụ na akwa kwesịrị ...
ebe free download Lightroom Russian mbipute. nye njikọ ahụ biko.
ebe free download Lightroom Russian mbipute. nye njikọ ahụ biko. cwer.ru Adobe Photoshop Lightroom 4.1 Portable Russian version http://www.adobe.com/en/products/photoshop-lightroom.html Lightroom Direct njikọ maka free download http://shareflare.net/download/29740.2884d448X5eda324bXNXXfb7feXNXXXXXXX .html ee ee, na ibudata n'ebe ahụ ...
Kedu ihe na-agbagharị shutter?
Kedu ihe na-agbagharị shutter? Nke a bụ ụzọ isi mee etiti mgbe e gosipụtara akụkụ dị iche iche nke eserese n'oge dịgasị iche, ma ọ bụghị n'otu oge ahụ. Na nkenke. Anyị mepụtara ngwaọrụ nke wezuga mmetụta a kpamkpam. ...
Kedu ihe CROP gbara na gbagọrọ agbagọ, igwefoto kpochapụrụ, wdg.
Kedu ihe ejiri CROP na-eme ihe ọkụkụ, na igwefoto kpụrụ akpụ, wdg. Photoshop, akara (nke pụtara mark1-mark4, obughi pyadvak) - igwefoto onye nta akụkọ, mepụtara naanị maka ndị ọkachamara. O we fesaa))) ...
esi eweputa foto na usoro JPEG
otú nyefee photos na JPEG format ma ọ bụrụ na m na-okokụre ngosi na ITS ga-sụgharịa a format JPEB, ebe ọ bụ na ya ga-azọpụta dị ka? N'ileghachi anya na ihe format tupu ya ...
Ajụjụ dị mkpa. Onye ọ bụla maara otú nsonye dị iche si dị iche na ntinye nke ngwa ahụ? Ọbụna oghere bụ otu ihe ahụ ...
Ajụjụ dị mkpa. Onwere onye ma otu esi etinye ihe di iche na ntinye aka? Enweredị oghere otu ebe ahụ ... M ga-etinye cops 5 m. Ntinye vidiyo ntinye akụrụngwa kachasị elu. Oghere - ị maara, ...
Kedu otu esi eme ka ogo nke foto ahụ dị na mmemme ndị dị na kọmpụta gị?
Kedu otu esi eme ka ogo nke foto ahụ dị na kọmputa gị na kọmputa? mepee foto, bidogharịa, pịa ákwà ngebichi, mepee Paint, si n'aka ekpe na n'elu pịa Ijenye ma tie ihe na-adịghị mkpa Debe foto na ...
N'ime afọ ole ka foto pụtara?
N'ime afọ ole ka foto pụtara? Ihe o mepụtara mụrụ nwa ọhụrụ nke mgbasa ozi na ụdị mbụ nke mkpọsa mgbasa ozi, tinyere akwụkwọ edemede, akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi akụkọ. Na London, ...
Kedu ihe bụ ISO na igwefoto?
Gini bu ISO na igwefoto? Otu ihe ahụ nwere mmetụta uche nke ihe nkiri ahụ, nke e gosipụtara na nkeji nke ọkwa mba ụwa (ISO) Site na ntụnyere ahụ, ịdị elu nke ọgụgụ isi, ọka ka ukwuu na fim ahụ na mpụta nke "mkpọtụ" ...
Na - atụgharị uche: kedu ihe "kaadị ebe nchekwa 6" pụtara?!
Na - atụgharị uche: kedu ihe "kaadị ebe nchekwa 6" pụtara?! Maka kaadị ebe nchekwa nke Secure Digital (SD) na Secure Digital HC (SDHC), a na-eji paramita puru iche iji nyochaa njirimara ọsọ - klaasị ọsọ (SD ...
HDR kedu ihe ọ bụ?
HDR kedu ihe ọ bụ? http://blyg.livejournal.com/22444.html HDR bu ihe ohuru na ohuru ohuru na eserese; Usoro a na - enyere gi aka ime foto di nma nke ukwuu obuna site na nke oma. HDR ...
kedu ihe bụ selfie
Gịnị bụ Selfie? Ọ na-ewere foto nke onwe gị n'ihu igwefoto n'ihu, site na enyo ma ọ bụ gbanwee oghere ahụ site na iji onwe gị foto onwe gị. Shotgun. Nke a bụ nwatakịrị nwanyị na-amaghị ihe na-amaghị ama! ) ...
gwa m ka esi eme fotkatsya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ..
gwa m ka esi eserese .. esela nsogbu, ihe bụ isi! Okwesighi ime dika GOST 32843-2004 na "foto dị obere nke ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị maka obere folda na obere nnọkọ mmekọrịta." Wepụtara ya na GOST: 2.6. Ihe nlereanya ahụ kwesịrị ...
Achọrọ m itinye iko na foto m, gwa m usoro ihe omume ahụ ... ma e wezụga photoshop
Achọrọ m itinye iko na foto m, gwa m mmemme ahụ ... belụsọ Photoshop Lee azịza m ebe a: http://otvet.mail.ru/question/55959991/ Gimp, agba. Mba, ihe omume a "stylist", wdg nwekwara supergu ike. Amaghị m ... ....
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,323.